Horgalo iyo Isxambaar laga filayo inay Laascaanood soo gaadhaan | Xaysimo
Home War Horgalo iyo Isxambaar laga filayo inay Laascaanood soo gaadhaan
Horgalo iyo Isxambaar laga filayo inay Laascaanood soo gaadhaan
Magaalada Laascaanood ayaa dhowaan la filayaa inay soo gaadhaan qaar ka mid ah xubnaha aan taageerada shacabka haysan ee degaamadaas kaga jira goleyaasha Somaliland, kuwaas lagu naaneyso horgalo ama Isxambaar.
Ujeedada socdaalkooda ayaa lagu sheegay sidii ay u dejin lahaayeen kacdoon iyo rabshado degaamadaas ka taagan.
Xaalada Magaalada Laascaanood ayaa weli aad u kacsan, waxaana weli yaalla oo aan la aasin Meydka nin shacab ah oo ciidamada Somaliland dileen, iyadoo ay masuuliyiinta Somaliland ku guuldareysteen Aaska marxuumka.
Wax rajo ah lagama qabo in masuuliyiintan Somaliland ka socdaa ay wax ka bedelaan kacdoonka shacabka ee magaalada ka taagan, maadaama horey loo soo tijaabiyey balamaha ay qaadaan, iyadoo la xaqiijinayo in qaarkood ay si hoose ula xidhiidhayeen odayaasha degaanka balse ay fekerkoodii ku guuldareysteen.
Mudaharaadyo labadii maalmood ee ugu dambeeyey gudaha magaaladda ka dhacayey ayaa sababay in shacab illaa 4 ruux gaadhayaa ay ku dhaawacmaan, kadib markii Ciidamad Somaliland oo ku gaashaaman gadiidka dagaal ay rasaas ooda kaga qaadeen shacabkii mudaharaadyadda sameynayey.
Tegista weftigan ayaan illaa hadda dhinaca Somaliland laga xaqiijin.